March 2017 – Page 2 – siifsiin
Hariiroo maatiin kuushii uummata Oromoo wajjin qabu maal fakkaataa?
Oromoon damee kushii kessatti ramadama. Kush uummattoota bahaa Afrikaa kessaa, Afaan Kush kan dubatanidha.Kanaf Ormoon kushidha. Horoofi Oromon , hidda latiinsa Ormoo kessatti kan jalqabaati. Hiddi dhalootaa kun Horoo kaasee Raayyaa bira gaha. Ilmaan Rayyaa lamaan Maccafi Tuulamadha.Ragaalee hedduu hiddi Oromoo kush ta’u ibsan keessaa kittaabni qulqulluu isa tokko.Kitaabni qulqullun yeroo jalqabaatif Afaan Hiibruutiin bareefame.Sana … Continue reading Hariiroo maatiin kuushii uummata Oromoo wajjin qabu maal fakkaataa?
Baayoo gaazii uumama
Dhaabni baayoo gaazii oksijinii malee faltii horii (loowwanii)akkasumas biqiloota humna (energy) maddisiisuu danda’an irraa baayoogaazii oomishu.Biqiltooti humna maddisan kunniin biqiloota rakasa,nyaataaf osoo hintaane boba’aa (biofule) oomishuuf biqilfamanidha. Boba’aan uumama adda addaarraa argamu kun bifa gaazii ,jabaataa ykn dhangala’aa si’a ta’u, uumama dhiyoo hurraadhaan uumaman keemikaala of keessaa hinqabnerraa burqa. Baayoo gaaziin boba’aa bifa okisiijiinii hinqabneen … Continue reading Baayoo gaazii uumama
Yaa dargaggootaa Baradhaa!
Farra wallaalummaa; Balbala qaroominaa; Humna tokkummaa; Riqaa guddinaa. Hundee hayyuummaa; Ibsaa jireenyaa; Warqii hin ligidoofnee; Qabeenya hin badinee, hin cabinee. Kan golga dukkannaa ittiin tarsaasaan; Daawwittii iccittii addunyaa itti hubatan; Mala taaba dooffummaa itti diigaan; Tooftaa deegaa itti mancaasaan; Furtuu rakkoo ittiin hiikaan; Daandii jijjiirrama fidaa( Converter Reactor); Meeshaa waanjoo gabrummaa itti caabsan; Riiqicha bilisummaa … Continue reading Yaa dargaggootaa Baradhaa!
Dhibeen dhiibbaa dhiigaa akka waan rakkoo warra biyyota guddatan qofa ta’etti ilaalamaa ture. Haata’u malee, barootan[ waggoota] 20 -30 dabran asitti, haalli kun jijjiramuudhaan biyyota Awuurooppaafi Amaarikaa caalaa biyyoota Afriikaa keessatti daabalaa dhufeera.Baayi’inni isaas hawaasa hiyeeyyii keessatti daabalaa dhufuusaa qorannoon ni ibsaa. Gosa dhiibbaa dhiigaa Lakkofsa kan irraa (Systolic) Lakkofsa kan gadii (diastolic) Kan mudaa … Continue reading Dhibee dhiibbaadhiigaa!
Yeroo baayi’ee murtii kennuu qabna yoo ta’e waan tokko tokko dhiisuu qabna.Yeroo ani karaa walqaxaamuru irra ga’u murteessuutu narra jira.Gara mirgaatti yoon deeme, karaa isa karaa isa gara bitaatti nageessun dhiisa. Gara bitaatti yoon gores karaa isa mirgatti nageessu dhiisuun qaba. Namoonni baayi’een waan qaban gadi dhiisuu hinjaallatani,Kanaafuu waan tokko murteessuuf baayi’ee rakkatu.Yeroo baayi’ee waa … Continue reading Dhibee dhiibbaadhiigaa!
Yeroo baayi’ee murtii kennuu qabna yoo ta’e waan tokko tokko dhiisuu qabna.Yeroo ani karaa walqaxaamuru irra ga’u murteessuutu narra jira.Gara mirgaatti yoon deeme, karaa isa karaa isa gara bitaatti nageessun dhiisa. Gara bitaatti yoon gores karaa isa mirgatti nageessu dhiisuun qaba. Namoonni baayi’een waan qaban gadi dhiisuu hinjaallatani,Kanaafuu waan tokko murteessuuf baayi’ee rakkatu.Yeroo baayi’ee waa … Continue reading Faayidaa nyaata Beeyladaa…
Faruu Daa’imaa Oromoo Booranaa
Namii achii gadi deemu Dhalee tiyyaa fakkata Namii dhalee tiyya dhaane Mataa kiyyoo barbadee Hoo ijjoollee ijjoollee ijjoollee Dhalee tiyyaa ijjoollee Didiqoo tiyyaa ijjoollee. Ijjoolleetin sii deete Gulummaa duuban sii teete Boorantittiin sii deettee Qaayummaa gubban sii teette Hoo’oo ijjoollee ijjoollee ijjoollee Dhalee tiyyaa ijjoollee Didiqoo tiyyaa ijjoollee. Ani siin jibbuu maa oddaa Ani siin … Continue reading Faruu Daa’imaa Oromoo Booranaa
Seenaa Abdii fi Caalaa
Abbaa!” jedhe Ifaa xinnichi.Itti fufees “Maaliif boolla kana qottaa?Guyyoota baayi’ee dabraniif kanuma qotaa turte,Akkan si argutti baayi’ee kan dadhabde natti fakkaata” Abbaan Ifaa akaafaasaa lafa kaa’ee,bishaan ilmisaa qaruuraadhaan fideef irraa habbuuqqatee gadi taa’e.”Ilmakoo! mee oduu durii tokkon sitti hima”Jedhee jalqabe. “Bara durii qonnaan bultooti lama biyya hirdhinni bishaanii keessa jiru keessa jiraataa turan;Tokko maqaan isaa … Continue reading Seenaa Abdii fi Caalaa
Gosa Bukeessa Baayoo Gaazii Yeroo dabre,barruu keenya jildii 9ffaa keessatti waa’ee dubartoota sadii baayoo gaaziidhaan fayyadamuun bu’aa argatani kaafnee isin dubbisiisneerra.Jildii 10ffaa kana keessattimmoo waayee gosa dhaaba ykn ijaarsa baayoo gaazii baayi’ee filatamaa ta’e ilaalla. Biyyoota ol guddataa jiran keessatti gosooti baayoo gaazii beekamoo ta’an lamadha.Inni tokko iddoo hinsochoonerratti kan tolfamu yoo ta’u,inni kaanimmoo bifa … Continue reading Baayoo Gaazii